Forum serasera malagasy Omby anaty Sambofiara ve ny biby rehetra ? - Dinika forum.serasera.org
Omby anaty Sambofiara ve ny biby rehetra ?
Fitohizan'ny hafatra : Omby anaty Sambofiara ve ny biby rehetra ?
Nehemiah - 12/06/2013 09:46
Mitoraka matetika an'ity fanontaniana fihaikena ity ny tsi-mpino ary mieritreritra fa tsy hay valiana ilay izy. Kanefa misy tokoa ny valiny, ary valiny tsotra.
Nila naka biby firy tao anatin'ny Sambofiarany i Noa ?
Gen. 6:19-20 : Ary ny zava-manan-aina rehetra, dia ny nofo rehetra, hitondranao roa avy isan-karazany ho ao anatin’ ny sambo-fiara, hovelomina miaraka aminao; ho lahy sy vavy avy ireo. Ny vorona, samy araka ny karazany avy; ary ny biby, samy araka ny karazany avy, ary ny biby rehetra izay mandady na mikisaka amin’ ny tany, samy araka ny karazany avy, dia, roa avy samy araka ny karazany avy, dia roa avy isan-karazany no hankeo aminao hovelomina.
Gen. 7:2-3 : Ny biby madio rehetra isan-karazany dia hanalanao ho ao aminao fito avy, lahy sy vavy; ary ny biby tsy madio isan-karazany roa avy, lahy sy vavy; ary ny voro-manidina koa isan-karazany fito avy, lahy sy vavy: mba tsy ho lany taranaka ambonin’ ny tany rehetra ireny.
@ teny Hebreo ôrijinaly nanoratana an'ireny andininy ireny, ny teny izay nadika hoe biby dia "behemah", ary midika hoe biby manana hazon-damosina mivelona ambony tany à ankapobeny. Ny "biby mandady na mikisaka" dia nadika avy @ teny Hebreo "remes", izay manana dikany maromaro, fa eto angamba dia milaza ny "reptiles". Mazava loatra fa tsy nila naka bibin-dranomasina i Noa satria tsy maharingana azy ny Safo-drano. Mahatsikaiky anie ireny olona manao filazàna tsy misy fotony momba ny trozona mandeha ambonin'ny tokontanin'ny Sambofiara sy ny réservoirs fitahirizana trondro e .
Marina aloha fa nisy karazana bibin-dranomasina maro dia maro ringan'ny Safo-drano satria mitera-doza ny rano maria mikoriana mafy tahaky ny @ Safo-drano. Fa raha nanapa-kevitra tsy hitahiry karazam-biby sasany @ fahendreny Andriamanitra dia tsy raharahan'i Noa izany ary tsy raharahantsika koa.
Tadidio, ry namana isany, fa ny biby rehetra "nanam-pofonaina teo am-bavorony, avy tamin’ izay rehetra teo amin’ ny tany maina" no naringan'ny Safo-drano (Gen. 7:22). Ka angamba tsy nitondra insectes i Noa satria tsy manana vavorona ny insectes fa mason-koditra kely @ karana ivelany no iainany. Tsy nila naka zavamaniry koa izy satria afaka manohy ny ainy ny voany. Ny sasany koa dia afaka manohy ny ainy ambony vongan-kazo mitsingevaeva, mb@ insectes sy biby tsy manana hazon-damosina hafa.
Nehemiah - 12/06/2013 09:47
Ny karazam-biby @ Baiboly : angamba kosa tsy mihevitra isika fa naka bergers allemands 2, cotons de Tuléar 2, dobermen 2 sns anaty Sambofiara i Noa ! Tsy nila afa-tsy alika 2, izay nanana fisamihafàna ara-pototarazo betsaka (karazana bâtards izany). Jereo tsara fa ny karazana alika be dia be ananantsika ankehitriny dia taranaky ny karazana alika 1 nitovitovy t@ amboadia.
Tsarovy koa fa tsy mitovy @ karazana nofaritan'ny siansa ny karazana @ Baiboly. Ny siansa, ohatra, dia manavaka ny maky, ny aye-aye, ny sifaka... fa ny an'ny Baiboly dia rehefa gidro dia gidro. Satria tsy namorona karazana gidro be dia be Andriamanitra t@ voalohany fa karazana 1 ihany, izay nanjary karazana be dia be t@ alalan'ny spéciation. Mbola tsy nofaritan'ny manam-pahaizana raha mitovy @ genre na @ famille @ fanasokajiana zavamananain'i Linée ny karazan-javamananaina ara-Baiboly, fa misy zavatra 1 azo antoka : raha afaka miteraka zanaka ny biby 2 dia mitovy ny karazana ara-Baiboly misy azy.
Jereo anie ny soavaly sy ny ampondra ary ny zebra. Taranaka karazam-biby 1 izy ireo satria afaka mifanome zanaka izy ireo, na dia tsy afaka miteraka aza ilay zanaka. Taranaka karazam-biby 1 koa ny alika sy ny amboadia ary ny amboahaolo. Ny karazana omby rehetra dia taranaky ny Aurochs, izay mbola taranaky ny karazam-biby 1 izay razan'ny bison sy ny buffle koa. Afaka miteraka zanaka ny liona sy ny tigra ary ny jaguar, ka angamba taranaky ny karazam-biby 1 izy ireo.
Mbola tsy fantatra tsara raha mifandraika @ "genre" na @ "famille" @ fanasokajiana bibin'i Linée ny karazana t@ Famoronana, fa ataontsika hoe genre ilay izy. Rehefa atao ny tontaliny dia genres 8 000, anatin'izay ny genres efa lany taminga, no niakatra t@ Sambofiara, izany hoe biby 16 000 mahery kely.
Raha ny momba ny genres lany taminga dia tsarovy fa manana fironana hanome anarana genre vaovao an'izay fôsily rehetra hitany ny paleontôlôga. Kanefa fandidiana tsy manapaka izany, ary angamba surestimé be ny isan'ny genres-na biby lany taminga. Jereo izao ny sauropodes (brachiosaures, apatosaures, camarasaures,...), 87 ny isan'ny genres nomena azy ireo kanefa 12 no mitombina ary 12 koa no "heverina fa mitombina".
Nehemiah - 12/06/2013 09:48
Omby anaty Sambofiara ve ireo dinôzôra gilady be ireo ? Fanontaniana apetraky ny tsi-mpino matetika io, kanefa efa hitantsika fa mihoatra be angamba ny isan'ny genres nomena azy ireo. Tokony fantarina koa fa 106 @ genres-na dinôzôra 668 fantatra ankehitriny no milanja mihoatra ny 10 t rehefa lehibe. Tadidio koa fa tsy milaza mihitsy ny Baiboly fa biby efa lehibe no niditra t@ Sambofiara. Angamba mbola tsy niala sakana akory ny biby ngeza indrindra niditra tanaty Sambofiara. Angamba koa ny salan'ny haben'ny biby anatin'ny Sambofiara dia ny haben'ny totozy, ary 11% ihany no lehibe noho ny ondry.
Nahoana no tsy nanjavona ny otrik'aretina aorian'ny Safo-drano ? Ohatra hafa @ fanontaniana apetraky ny mpandà an'Andriamanitra sy ny évolutionnistes théistes izay. Heveriny fa misongadina sy mavitrika tahaky ny ankehitriny ny otrik'aretina t@'izany, ka voan'ny aretina rehetra @'izao tontolo izao ny mpandeha ny Sambofiara. Kanefa azo heverina fa mateza kokoa ny otrik'aretina t@ lasa, ary voa haingana no very ny fahafahany mivelona anaty zavamananaina samihafa na ivelan'ny zavamananaina 1. Raha ny tena marina dia mbola maro ankehitriny ny otrik'aretina afaka mivelona rehefa maina na vaingan'ny hatsiaka na anatin'ny bibikely mpampifindra na entin'ny zavamananaina 1 ka tsy mahatonga aretina azy. Farany, mifandraika @ filazan'ny Baiboly fa nihalo tsikelikely ny zava-drehetra ny fihenan'ny fahatantiana aretina.
Omby anaty Sambofiara tokoa ve ny biby rehetra ?
300x50x30 hakiho ny Sambofiara (Gen. 6:15), izany hoe 140x23x13,5 m raha ny hakiho t@ andron'i Môsesy no alaina. 43 500 metatra tora-3 izany ny habeny.
Raha notazomina anaty kivaroho manana habe 50X50X30 santimetatra @ antsalany ny biby dia 75 000 santimetatra tora-3 ny haben'ny kivaroho 1. Nohon'izany, tsy nibahana afa-tsy 1 200 metatra tora-3 ny biby 16 000. Na dia ataontsika hoe nisy insectes 1 000 000 dia tsy olana izany satria kely ny erana ilainy. Raha samy notazomina anaty kivaroho 10x10x10 santimetatra, izany hoe 1 000 santimetatra tora-3, dia tsy nibahana afa-tsy 1 000 metatra tora-3 izy ireo. Mbola nisy 41 300 metatra tora-3 ametrahana ny sakafo ho an'ny biby sy ivezivezena. Kanefa, averiko indray mandeha, tsy ao anatin'ny kajy ny insectes satria tsy ao anatin'ny "behemah" sy "remes" @ Gen. 6:19-20 izy ireo.
Tadidio fa resaka vonjimaika ilay izy fa tsy paquebot de luxe akory ny Sambofiara.
Na dia ataontsika hoe tsy natao eo ambonin'ny ts11 ny kivaroho dia tsy olana izany, satria tsy nila afa-tsy ny antsasaky ny erana nisy t@ rihana 3n'ny Sambofiara ny biby rehetra mba hanana erana hi-"se dégourdir".
Nehemiah - 12/06/2013 09:49
Ny @ filan'ny biby @ lafiny ara-tsakafo
Angamba nitondra hanina voafitina sy nohamainina betsaka ny Sambofiara. Céréales sy vilona no nomen'i Noa mianakavy ny bétail. Angamba tsy nihoatra ny 15%-n'ny eran'ny Sambofiara no nobahanan'ny sakafo. Ny rano fisotro koa dia tsy nibahana afa-tsy ny 9,4%-n'ny erana. Sady azo heverina fa nieritreritra ny hanangona ranonorana i Noa mianakavy .
Tototry ny tay ve ny Sambofiara ?
Aza mihomehy ianareo fa tena misy tokoa ny olona manontany an'izay ! Angamba tsy azo heverina fa nanadio ny kivaroho isa-maraina i Noa mianakavy . Angamba nanana gorodona miankina ny kivaroho, na nisy varivary ny gorodona. Nivoaka avy any ary nokobanin'ny rano (nisy rano be dia be manodidina azy ireo ) ny maloto na nohanin'ny kankana namadika azy ho compost ilay izy (sady @'izay afaka namokatra kankana atao hanina ho an'ny biby sasany i Noa mianakavy). Raha atao matevina be ny litière dia afaka maharitra herintaona mahery tsy mila soloina indraindray. Angamba nasiany tain-tsofa na taim-bankona na volom-bato mba hifoka ny rano ka tsy nameno ny Sambofiara ny fofona .
Nehemiah - 12/06/2013 09:50
Sahaza ny biby foana ny haben'ny Sambofiara sy ny fanomezana sakafo ary ny fitandrovana ny fahadiovana, kanefa azo heverina fa niteraka fitsitsiana bebe kokoa ny fatoriana ririnin'ny biby sasany. Misy milaza koa ny sasany fa t@'izany fotoana izany no namoronan'Andriamanitra ny fironan'ireo biby ireo hatory ririnina, kanefa raha izay no izy dia maninona no tsy matory ririnina ny biby rehetra ety ambonin'ny Tany ?
Hitantsika eto fa azo atokisana @ lafin'ny zavatry ny tany ny Baiboly. Averiko ety ny vontoatiny :
- vitsy kokoa nohon'ny karazam-biby ara-tsiansa ny karazam-biby t@ Famoronana.
- tsy nandray afa-tsy ny biby manana fofon'aina @ vavorony mandeha ambony tany i Noa.
- azo heverina tsara fa biby mbola kelikely no nalain'i Noa t@ karazam-biby ngeza indrindra.
- kely sisa ny tsy mampitovy habe ny Sambofiara @ Titanic ka omby tsara ao anatiny ny biby rehetra sy ny hanina ary ny rano fisotro, sady mbola misy erana ivezivezena.
- mora ny mitandro ny fahadiovan'ny Sambofiara ho an'ny olona lalin-tsaina tahakan'i Noa mianakavy.
- tsy naharingana ny otrik'aretina rehetra ny Safo-drano.
Ny Tompo Jesoa Kristy mihitsy no nanamarina ny fitantaran'ny Baiboly momba ny Safo-drano. Niteny koa izy hoe : "Raha ny zavatra et? an-tany aza no nolazaiko taminareo ka tsy inoanareo, ahoana no hinoanareo, raha milaza aminareo ny zavatra any an-danitra Aho ?" (Jn. 3:12)
Raha diso @ zavatra azo akàna toky tahaky ny jeôgrafia sy ny tantara ary ny siansa ny Soratra Masina, nahoana no tokony atokisana ilay izy rehefa miresaka momba an'Andriamanitra sy ny any an-koatra, izay zavatra tsy azo anaovana fanandramana ? Ka ny kristiana dia tokony vonona mandrakariva ny "manamasìna an’ i Kristy ho Tompo ao am-ponareo [Isa. 8.12, 13] ; ary aoka ho vonona mandrakariva hianareo hamaly izay manontany anareo ny amin’ ny anton’ ny fanantenana ao anatinareo, nefa amin’ ny fahalemem-panahy sy ny fanajana" (1 Pet. 3:15
) rehefa milaza fa tsy mifanaraka @ zava-misy ara-tsiansa ny tsi-mpino.
Nalaina t@ boky "Noah’s Ark: a Feasibility Study" nosoratan'i John Woodmorappe ny antontan-kevitra rehetra ao anatin'ity lahatsoratra ity.
5laody - 12/06/2013 13:29
Tamin'ireo biby ireo koa izany no nakan'ny ny fianakaviana natao loaka isan'andro?
Rehefa mandalo eo Anosy, izahay fony kely dia mahita vorompotsy be dia be ao Ambohitsorohitra
dia vaky vava hoe: vorompotsy indray izao no laokan-dRatsiraka androany.
endriny - 12/06/2013 21:06
Efa hoe "ny izao tontolo izao" tamin'ny israelianina dia ireo foko israelita rehetra ihany. Taiza no nahatongavan'i Noa tany Afrika haka zirafa mpivady, sy tany Australia haka Koala mpivady?
Dia vilona firy taonina no natao tao anaty sambo fiara hampikaliana ireo karazam-biby misy roroa nandritry ny 40 andro? Dia bibikely firy kilao no notehirizina omena ny ramanavy isan-karazany?
Mba angano moa ka natao.
Taloha dia "Israely = izao tontolo izao", fa rehefa voazanaky ny tany ezipta ny israelianina vao tonga saina fa hay tsy ry zareo irery no "izao tontolo izao". Dia nanomboka nampiasaina ny teny hoe : "zanak'Israely"
Vakio tsara ny baiboly dia ataovy tsara ilay fanadihadiana lahatsoratra nampianarina tany an-dakilasy....
endriny - 12/06/2013 22:04
na ilay dikan-teny hoe "SAMBOFIARA" aza dia efa mampihomehy.
Nga io nisy kodiarana?
Nehemiah - 13/06/2013 10:51
Tsia : izahao ny Gen. 1:29 : Ary Andriamanitra nanao hoe: Indro, efa nomeko anareo ny anana manintsam-boa rehetra izay ambonin’ ny tany rehetra ary ny hazo rehetra izay misy voa sady manintsam-boa; dia ho fihinana anareo ireny.
Végétariens ny olona talohan'ny Safo-drano.
Nehemiah - 13/06/2013 10:54
Ny dikan'ny fiara dia "zavatra fitondràna". Mba mahalalà menatr'olona ary ataovy ny zavatra anakiananao @ fomba tsy rariny ahy : vakio tsara ny lahatsoratra ka diniho voa mamaly.
Nehemiah - 13/06/2013 10:56
bor2lais - 13/06/2013 16:28
Végétariens ny olona talohan'ny Safo-drano
'Zany ve ?
Ahoana izany no azo hanazavana ny asan'i Abela (mpiandry ondry raha tsy diso aho) sy ilay fanatitra nataony izay nankasitrahaNY !
Ny an'i Kaina (mpiasa tany) anefa tsy nankasitrahaNY !
Ialan-tsiny fa manao resaka hanina !
Nehemiah - 13/06/2013 16:40
Tsy maninona ka. Tsy milaza mihitsy ny Baiboly fa nihinan'ondry i Abela. Misy ny zavatra azo avy @ ondry ankoatran'ny hena : volo, ronono, tay anaovana afo...
Raha ny momba ny soron'i Kaina sy Abela dia angamba fantatrao ny hoe : "Ary saiky diovina amin’ ny rà avokoa ny zavatra rehetra araka ny lalàna; fa raha tsy misy rà alatsaka, dia tsy misy famelan-keloka." (Heb. 9:22)
Ny Soratra Masina no anazavàna ny Soratra Masina. Nirehareha fotsiny i Kaina nieritreritra fa tsy mila manatitra ra izy.
bor2lais - 13/06/2013 17:48
Tsy milaza mihitsy ny Baiboly fa nihinan'ondry i Abela.
Tsy milaza koa anefa ny Baiboly fa tsy nihinan'ondry izy ! Tahaka ny tsy ilazan'ny Baiboly fa nisotro rononon'ondry izy !
endriny - 13/06/2013 18:26
Ary nataoko fa hoe ny "ara" amin'ny Tenigasy dia "zavatra mihodina, na manodidina", kodia-ara-na, ara-kevitra, ara-politika, ara-toekarena, araky .... mhmhmhmmh
Fa ny hoe "fiara" = "fitondrana" dia vaovao tanteraka amiko, fa marina aloha fa izay amin'ireo fitaovana fitondrana ny fiara
mirananirina - 13/06/2013 19:36
Ary misy mandinika ihany kay ny testamenta taloha an